China uqhagamshelo lwefenitshala eyenzelwe wena kunye nezixhobo zokubopha - abavelisi - i-Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co, Ltd
Ekhaya >Izahlulo zefanitshala zeplastiki > Unxibelelwano lwefanitshala kunye nezinto zokuqinisa
Ifanitshala Anti tip Metal Kit Umtya
Ibhabhathane yokuguqula i-ankile yeplastiki yenylon iplagi
L ukumila abakhuseli beplastiki
Ifanitshala yePlastikhi yeBlackhead Corner Connector
Umkhuseli webhokisi yeplastiki ohleliyo oyi-85mm
Uhlobo lwesihlalo seplastikhi eligaxwayo
1. Ngaba unayo umzi-mveliso wakho? Ewe, singumvelisi eChina ngaphezulu kweminyaka eli-10. Efektri yethu ibekwe kwiPhondo Guangdong. 2. Ndingatyelela njani umzi-mveliso wakho? Ii-Pls ngobubele zisazise kwangaphambili ukuba uceba ukutyelela Singakubonisa indlela okanye sikulande esikhululweni okanye k......
Ibhokisi yedesika yedesika
Intsimbi yeplastikhi yokuCoca kweNtloko yeNtloko
FAQ: 1. Ingaba unayo umzi-mveliso wakho? Efektri yethu ibekwe kwiPhondo Guangdong. 2. Ndingatyelela njani umzi-mveliso wakho? Ii-Pls ngobubele zisazise kwangaphambili ukuba uceba ukutyelela Singakubonisa indlela okanye sikulande esikhululweni okanye kwisikhululo seenqwelomoya. 3. Ngaba unika iisampu......
I-Drawer ye-Anti Slip yePlastiki yeDrafti yePlate